March 20, 2008, 9:08 am Filed under: Lin Let Kyal Sin မမစိုးဝှက်က အားရပါးရ အကြောင်းအရာနှစ်ခုတောင် Tag လုပ်လိုက်တော့ ပထမတစ်ခုကို ကျွန်မ အရင်ဆုံးရေးရပါတော့တယ်။ ပထမတစ်ခု Tag ထားတာက ဇာတိမြေ(သို့မဟုတ်)အိမ်တဲ့ .. ။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောရရင် ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာကို အရင်ရေးချင်တာပါ😛 ။ အကြွေးတွေပုံသွားမှာစိုးလို့ ပထမတစ်ခုကို အရင်ရှင်းလိုက်ပါပြီ။
ညောင်ပွင့်လေးတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေနေတဲ့ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့ ခရေပွင့်တွေကျဲထားသလို သဘာဝအလှလေးတွေဝန်းရံထားတဲ့ ဟင်္သာမြေ ပဲခူးတိုင်းရဲ့ နယ်မြို့လေးတစ်ခုဟာ ကျွန်မရဲ့ ဇာတိမြေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်ကားလမ်းမကြီးဘေးမှာ တည်ရှိနေတဲ့ သေးငယ်သော မြို့ကလေးဟာ ကျွန်မမိဘနှစ်ပါးလုံးရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်သလို ကျွန်မအမေကလည်း မွေးရပ်မြေမှာပဲ ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျွန်မတို့ညီမတွေကတော့ တစ်ကျောင်းတည်းသာရှိတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းကြီးမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတယ်။ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးအများဆုံးရှိသော နယ်မြို့လေးမှာ ကျွန်မတို့မိသားစုဘ၀ ဆွေမျိုးများဖြင့် သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။ ပဲခူးတိုင်းရဲ့ နာမည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟင်္သာကုန်းဘုရားဟာ ကျွန်မစိတ်ကို အစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုပါ .. ။ ရာဇ၀င်ထဲမှအမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ကျွန်မနှလုံးသားကို အစွဲဆောင်နိုင်ဆုံး ၊ အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံး အမျိုးသမီးက ဥဿပဲခူးမှ မဏိစန္နာပါပဲ .. ။ သေးငယ်တဲ့နယ်မြို့လေးရဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ကျွန်မမိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်ကြီးတစ်လုံးဟာ ကျွန်မဘ၀ရဲ့အမြတ်နိုးဆုံး အိမ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် .. ။ ရေနံတွေဝအောင်သုတ်ထားတဲ့ ပျဉ်ထောင်၂ထပ်အိမ်ကြီးဟာ မဲနက်မှောင်နေသလို ခြံတစ်ခုလုံးမှာ စိုက်ထားတဲ့ သီးပင်စားပင်နဲ့အလှပန်းပင်များက ကျွန်မတို့တစ်ခြံလုံးကို အေးမြသာယာစေခဲ့ပါတယ် .. ။ အိမ်ရဲ့ဘေးမှာ မာလကာပင်များကို ကျွန်မအဘွားကစိုက်ပျိုးလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်ရဲ့ အရှေ့ခြမ်းကို အလယ်မှာလူသွားလမ်းလေးပြုလုပ်ထားပြီး ဘေးဘယ်နှစ်ခြမ်းမှာတော့ အလှပင်များနှင့်သီးပင်စားပင်များကို အမေကစိုက်ပျိုးလေ့ရှိတယ်။ ရွက်လှ ၊ နှင်းဆီ ၊ စံပယ် ၊ ဂမုန်းပန်း အစရှိတဲ့ ပန်းပင်တွေနှင့် အခြားပန်းပင်သေးသေးလေးတွေကို ကျွန်မအမေက သေချာစိုက်ပျိုးထားပြီး ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်က ပန်းပင်လှလှလေးတွေကြားမှာ ကစားရာနေရာဖြစ်ခဲ့တယ် ။ သီးပင်စားပင်တွေကို ကျွန်မအဘွားက ဒိုင်ခံစိုက်ပျိုးပြီး သူစိုက်ပျိုးထားတဲ့အသီးတွေကို သူ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ခူးမိရင် စိတ်ဆိုးလေ့ရှိပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ညမှာ လူငယ်တွေက နောက်တဲ့သဘောဖြင့် ကျွန်မအဘွား သေချာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဗူးပုပင်လေးက ဗူးသီးတွေအားလုံးကို တစ်ခြမ်းစီပဲ ခူးသွားတာပါ။ ကျွန်မတို့အိမ်က သစ်ပင်ကြီးတွေနှင့်အုပ်မိုးနေတာကြောင့် အိမ်ဘက်အခြမ်းကနေ ဗူးသီးတစ်ခြမ်းကိုပဲမြင်ရပြီး လမ်းမဘက်မှာတော့ ဗူးသီးတစ်ခြမ်းမရှိတာကို အိမ်ထဲကနေ မမြင်ရပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ ကျွန်မအဘွားက ခြံရှေ့က သူ့ဗူးပင်တွေကို ဆူးခက်တွေနှင့် ၀ါးခြမ်းပြာတွေနှင့် ကာထားပါတော့တယ်။
၄) မောင်လေးထူးမြတ်တို့ကို TAG လုပ်လိုက်ပါတယ်🙂
Loving this post.., Thanks for sharing your feeling. Keep going Pal!!
Comment by SMNTL
March 20, 2008 @ 7:00 pm Reply	ဖတ်ရတာ ရင်ထဲနင့်သွားတာပါပဲ လင်းရေ။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေးကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။
March 22, 2008 @ 2:12 am Reply	ပဲခူးသူလေပခူးရွေမောဓော ဘုရား တစ်ခေါက်ပဲရောက်ဖူးတယ်ဒါတောင် လမ်းကြုံလို့ဝင်လိုက်တာ .. နီးရက် နဲ့ဝေး ဆိုတာမျိုးပေါ့း)အဆင်ပြေပါစေ ညီမလေး လင်းလက်
Comment by နှင်းပွင့်ဖြူလေး
March 24, 2008 @ 9:54 am Reply	လင်းလက်ရေ…ပဲခူးကအိမ်လေးက တကယ့်လွမ်းစရာလေးနော်။ တကယ်ရောက်သွားသလို ခံစားရအောင်ရေးနိုင်တယ်။
March 25, 2008 @ 2:07 am Reply	Sis Lin lett!!! I really miss my hometown when i read about your hometown!! I do wanna go back!!
March 25, 2008 @ 7:54 am Reply	ညီမလေးေ၇…
နေ့သစ်တွေမှာ အမြဲလှပနိုင်ပါစေ…. အချိန်တန်ရင်တော့ အိမ်ပြန်ရမှာ… ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းသာယာနေရင်တော့ ပိုပြီးပြည့်စုံမှာပါ… တို့မောင်နှမတွေ တနေ့တော့ … လှပခြင်းတွေ ပွင့်ဖူးမယ့် ဇာတိမြေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့…
March 26, 2008 @ 6:21 am Reply	This is the 3rd blog today i had reading about home and it’s really nice n I miss my mother home (Burma). And hope , one day we will be together again somewhere in Burma. It’s also remind me the sound name ( mother house ) which famous during 1969~70 in Burma. I would say ” no place like mother home “.
March 29, 2008 @ 2:10 pm Reply	အမေ့ အိမ် အ ကို တွေ..အ မ တွေ ရဲ့ အလယ် အမေ က ကျမ ကို ပို ကာ အထွေး ဆုံး မို့ချစ် တယ် ချစ် တယ်…အဆိုး အနွဲ့ တွေ နဲ့ မိဘ ရဲ့ အရိပ် မှာ ကွယ် ပူပင် သောက တွေ လဲမရှိ ခဲ့ ပါ တယ်..လူ့ လောက အလယ် လျှောက်ရတဲ့ အခါ ချစ်ရတဲ့ သူ တွေ့ ရ ပြန် တော့ အမေ့ အိမ် ကို လဲ မေ့ ထား ခဲ့ ပါ တယ်..ရုန်း ကန် ရင်း ဘဝ မှာ လေ ကွယ် ကျင်လယ် ခံ စား ရ ပြန် များ လာ တော့် အမေ့ အိမ် ကို ဘဲ သမီး အောင့် မေ့ လှ ပါ တယ်..
ဒီ သီ ချင်း လေးဟာ ဟိုး………လွုန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀ လောက်က မြန်မာ့အသံကနေ လာနေ ကြ သီ ချင်း လေး ပါ.. အကြောင်းအမိူးမိူး နဲ့ အမေ့ အိမ် ( မြန်မာပြည် ) ကို ခွဲခါ နေ ရ သူ ညီ အကို မောင်နှမ များအား မျှဝေ ခံစား နိုင် ရန် အတွက် ဖြစ်ပါတယ်.
March 29, 2008 @ 11:09 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI